Silo: उपकरण र उद्देश्य
कृषि र पशुपालन उद्यम सुरक्षित गर्न फिड silage प्रविधिको तयारीमा संलग्न छन्। यो क्षेत्रहरू, र यसको पछि संरक्षण बाट घाँस भेला छ। को Silo को एक निश्चित समय पछि जो सानो वा कुनै लगानी आवश्यक एक तयार चारा छ। तथापि, को लागि कृषि उत्पादनको उचित भण्डारण एउटा उदाहरण संग Silo, तस्वीर आवश्यक जो तल देखाइएको छ। यो निर्माण तयार जडीबुटी अधिकतम भण्डारण सर्तहरू प्रदान र एकै समयमा न्यूनतम मर्मतका लागत आवश्यक छ।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, यस प्रकारको को टावर को मुख्य उद्देश्य - यो चारा silage आधारित भण्डारण गरिएको छ। कटाई र चिस्यान संकेतक feedstock मा फसल सामाग्री को विश्लेषण पछि रिसीभर यस्तो संरचना पठाइएको छ। विशेष अवस्था, एक Silo सिर्जना जो, एक तंग छाप सुनिश्चित गर्ने क्षमता छ। यसलाई अक्सिजन पहुँच को कमी तपाईं चाँडै इष्टतम अवस्था फिड लागि उपयुक्त गर्न हर्बल ल्याउन अनुमति दिन्छ।
यसबाहेक पनि अनाज भण्डारण लागि प्रयोग Silos खुवाउन। यो दृष्टिकोण देखि, संरचना डाटा आकर्षक क्षमता र अनुकूल तापमान अवस्था कायम राख्न छन्। आधुनिक Silo, उदाहरणका लागि, जलवायु विशेषताहरु ट्र्याक गर्न थर्मोस्टेट एकीकृत गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ।
टावर जो विभिन्न सामाग्री देखि गर्न सकिन्छ छाप पर्खालहरु, को आधार गठन। परम्परागत ग्रामीण संरचना सामान्यतया ईटा, काठ, ठोस र पत्थर बनेको हो। हालैका वर्षहरूमा, कृषि उपकरण को निर्माता विशेष किरा पूर्वनिर्मित प्रकार थप मा-साइट स्थापना बाहिर छ को जो उत्पादन। परिणाम जहाँ यन्त्र प्यानल प्रारुप विधानसभा एक नम्बर पनि समावेश Silo, भवन मा एक कम लागत र उपलब्ध छ। व्यक्तिगत घटक अन्य सामाग्री बनेको गर्न सकिँदैन - उदाहरणका लागि, काम भागहरु को कार्यक्षमता प्लास्टिक को छन्, र जग लागि अझै प्रबलित ठोस जग प्रदर्शन हुनेछ। पनि टिप्पण लायक कृषि उत्पादन को अवस्था को निर्माण र मर्मतका को स्थायित्व कायम राख्न विशेष सुरक्षा सुविधाहरु सतहहरु बिना असम्भव छ भन्ने छ। त्यसैले, निर्माता आवंटित एक लास सुरक्षा कोटिंग त्यहि धातु प्यानल चिस्यान, रासायनिक प्रभाव र यांत्रिक क्षति देखि सतह सुरक्षित राख्दछ।
धरहरालाई जमीन गर्न सकिँदैन वा आंशिक recessed - यो स्थानीय climatic अवस्था र परिचालन आवश्यकताहरु मा निर्भर गर्दछ।7देखि 15 मिटर गर्न औसत दायरा मा संरचना उचाइ, फेरि, यो खुट्टामीटर सेवा हो कम्पनी गणना जो बुट मात्रा, मा निर्भर गर्दछ। यी वस्तुहरु को एक विशेषता सुविधा माथिल्लो भाग को कार्यान्वयन छ। परम्परागत सिमेन्ट Silo एक चोटीदार आकार, अन्तिम सिलिण्डर समर्थन संरचना छ।5देखि7पु गर्न नै दायरा को व्यास। त्यहाँ यस्तो भवन को एक सुविधा छ। तल भण्डारण रूपमा Silo देखि रस एक विशेष पिट मा accumulates भनेर बाहिर छ। यो परियोजना को लागि, सुरुमा 2-3% जग आधार पूर्वाग्रह आधारमा परिमाण राखे।
मुख्य काम कदम सामग्री सामाग्री को लोड र उतराई कम छन्। साथै, केही अवस्थामा, यो अपरेसन Trumbo विशेष मिसिन प्रदर्शन गर्न प्राविधिक क्षमता दिनुभयो। यो अवस्थाको इनपुट प्रविधि, धरहरालाई मा, गर्न। मानक कन्फिगरेसनमा, लोड र उतराई पर्खालहरु र छत प्रदान गर्न सकिन्छ कि विशेष Hatches मार्फत गरिन्छ। साथै, प्रत्येक प्वाल बाह्य क्षति र इन्सुलेशन सामाग्री विरुद्ध विशेष सुरक्षा छ। आवश्यक मतभेद आधुनिक Silo द्वारा नजिकै, mechanization को एक उच्च डिग्री समावेश गर्नुहोस्। सामान्य तरिका वा वैकल्पिक मा निर्माता लागू र टावर बहु नियन्त्रण प्रणाली पूरक काम सञ्चालनका स्वचालित हालतमा।
अक्सर, संरचना थप उपकरण को समावेश धरहरालाई आधारभूत लागत को बारे 30-40% छ। यो सामग्री र फिड बाली गुणस्तर सुधार जो उच्च प्रविधी उपकरण, को प्रयोग द्वारा बताए छ। थप सुरक्षा को भन्दा साधारण हालतमा आगो र दुर्घटना रोकन, चारा लागि वेंटिलेशन सिस्टम, सिँढी निर्माण र बिजुली मिटरिङ्ग Silo सम्बन्धित छ। पनि शुरू-सूचक यन्त्र हुनुको। उदाहरणका लागि, व्यापक फीड को भरने स्तर देखाउन सेन्सर प्रयोग। र परम्परागत मापन उपकरणहरू स्टाफ टावर भित्र चिस्यान र तापमान अध्ययनहरू बारेमा सम्हाल्न सक्नुहुन्छ समर्थन जो उल्लेख छैन।
को silage फिड सामग्रीको ठाडो संगठनको लागि सुविधाहरु खाइयों र pits, यस्तो भण्डारण रूपमा वक्ता को अवधारणा को एक निरंतरता थिए, तर एक आदिम स्तर मा। तर, सामग्री फीड को तेर्सो विधिहरू को प्रभावकारिता छैन टावर गर्न कमसल छन्। को खाडल मा ताजा कट घाँस भण्डारण उचित फीड उत्पादन को विशेषताहरु को सबै भन्दा राम्रो प्राप्त गर्न पनि अनुमति दिन्छ। तर Silo कारण सामग्री, उच्च प्रविधि र कार्यक्षमता को सुविधा गर्न भण्डारण अघिल्लो विधिहरू outperforms। निस्सन्देह, यो त्यहाँ छ, र यसको कमियां। सबै को पहिलो, यो पैसा लागत। निर्माण को औसत विशेषताहरु बारे 200-300 हजार। RUB खर्च। अर्को drawback यसको प्रदर्शन गुण कायम गर्न मा टावर नै समर्थन गर्न आवश्यकता छ।
किसान Pubert Primo - समीक्षा, सुविधा र समीक्षा
"सानो थोपा" - ग्रीनहाउस polycarbonate
सबै ग्रीनहाउस मा खीरे हेरचाह गर्ने बारे
अष्ट्रेलिया उपयोगी स्रोतहरू
शैक्षिक गतिविधि: मानिसको विकास कसरी प्रभाव पार्छ?
अजवाइन विभिन्न व्यञ्जन
SSL त्रुटि। SSL त्रुटि कसरी मिलाउने?
तपाईं रोशनी कसरी समायोजन गर्न थाहा छ?
उद्यमी मा उद्देश्य विनिर्माण अभ्यासहरू
रूसी एयर बेडा दिन: यो सबै थाले कसरी लामो पहिले
जेल "Hells मूल": दबाइ को चिकित्सकीय गुण
भूगोल: शब्द। पृथ्वी विज्ञान र यसको इतिहास